ခင်မင်းဇော်: ဘ၀ဒိုင်ယာရီ အမှတ်တစ်(အပိုင်း လေး)
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:57 AM
ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်း ပြန်ကြားရရင် အင်မတန်ဘဲ စိတ်ဝင်စားစရာ၊ စိတ်တက်ကြွစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ကျောင်းနေပိတ်နေစဉ်ကာလ ကျနော်တစ်ယောက်တော့ အဲဒီ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းတွေကို ဘာမှ မသိဘူး။ ဗိုလ်သင်တန်းဖြေမယ်ဆိုပြီး ရန်ကုန်ကို ဆင်းလာလိုက်တာ ရန်ကုန်ရောက်တာနဲ့ ၈၈၈၈ လုံးအရေးအခင်းထဲ ပါသွားပြီး ဗိုလ်သင်တန်းလည်း သွားမဖြေဖြစ်၊ အဲသည်နောက် ကျောင်းတွေကလည်း ပိတ်ထားနဲ့။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ အလုပ်ကြမ်းလုပ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆက်ပြတ်သွားလိုက်တာ။ ဘီဘီစီ နားထောင်ချင်တာတောင် အိမ်မှာ ရေဒီယို မရှိလို့ နားမထောင်ရ။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ အင်းစိန်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှာ အဖွဲ့ချုပ်က ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိန်လှဦးကို ခမောက်ဆောင်းပြီး မဲသွားထည့်ခဲ့တာဘဲ မှတ်မှတ်ရရ ကျန်ရစ်တယ်။
အစ်မဆက်ရေးပါဦး၊ စောင့်ဖတ်နေပါတယ်၊ လေးစားပါတယ်
I will be looking forward to more episodes :)
အစ်မရေ..နေ့တိုင်း လာနေတာ..ဒီနေ့တော့ အပိုင်းသစ်ဖတ်ရလို့ ပှော်သြားတယ်။naivechicဆီလာဖတ်တဲ့အတက်ြကျေးဇူးနော်။
အမကို ထမင်းပိုထည့်ပေးတဲ့ လူလူချင်းစာနာတတ်တဲ့ စစ်တပ်ထဲက ရဲဘော်တွေအကြောင်း သိရတော့ ၊ စိတ်ထဲဝမ်းသာမိတယ် ။ တကယ်တော့ သူတို့တွေထဲမှာလည်း စိတ်ထားကောင်းသူတွေပါပြီး ၊ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် စနစ်ဆိုးအောက်က မရုန်းနိုင်ကြသူတွေလို့ မြင်မိပါတယ် ။ သူတို့လိုလူတွေ မြန်မြန်ရုန်းထွက်နိုင်ပါစေလို့ ဒီစာစုကိုဖတ်ရင်း စိတ်ထဲကဆုတောင်းလိုက်မိပါတယ် ။
ထပ်ပြီး သူတို့ကို ဒီစာစုနဲ့အတူ တိုက်တွန်းလိုက်ချင်တာ .. ရုန်းထွက်ဖို့ဆိုတာ တကယ့်အလုပ်မှာ မလွယ်ကူပေမယ့် ၊ တကယ်စိတ်ရှိပြီး ကြိုးစားလုပ်မယ်ဆို အောင်မြင်မှာပါလို့ ။ အဲလိုနေ့ကို လူထုက ၀မ်းပန်းတသာ ကြိုဆိုနေမှာပါ ။
I come and read the part 4. Old saying is "The grasses under the army boot are getting stronger and stronger." you and 88 studnets' gernerations are icons for other students.
အရင်က တာဝန်ကျေခဲ့သလို ..
ခုလဲ သမိုင်းကို မပျောက်ပျက်အောင်
မှတ်တမ်းတင် ပေးတာ ကျေးဇူးအထူးပါ ..
I hope you'll continue with your memoirs, which make wonderful reading. We need this sort of documentation so that the coming generations will learn how the 88 Generation had conducted themselves -- with integrity, honor and defiance. Long live the spirit of the unbowed generation!